Life Keyt Moss libukeka indaba inganekwane. umsebenzi meteoric owaqala ngokuvukela ubuhle British ukuthi nane Kate ngephutha wabanjwa iso lwekhanda enye yezindawo ezinkulu kakhulu ukumodeliswa ejensi. Imodeli edumile emhlabeni wonke akazalelwanga emkhayeni ocebile. Umama nobaba Keyt Moss babe evamile abasebenzi London. Laliyini leli ubuhle bayo? Futhi kwakukhona ukuphila kwakhe futhi umsebenzi?
Kate wazalwa ngo edolobheni elincane Croydon, esemgwaqweni eduze neLondon. Keyt Moss esemncane akuzange uyazazisa imodeli emphakathini okusezingeni eliphezulu - ngoba ebuntwaneni Kwakungelula. Ngeshwa, noyise wentombazana, washiya umkhaya ekuseni kakhulu, kusale umama wakhe uLinda nezingane zakhe ezimbili ngezingalo zakhe. Lona wesifazane waphoqeleka ukuba sizosebenza njengothisha uweta ukondla Kate kanye nomfowabo omncane Nick.
izingane ukuphila kwaba pretty isidina futhi okuyisidina. Kate no-Nick ilungele ukusebenza njengoba oweta noma salesmen. Kodwa Kate uye yanquma ukuthi leli cala. Ozikhandlayo Linda Moss unqume ukwethula isipho izingane yena. UBooysen wakwazi ukusho ukuthi wonge imali eyanele ukuze undize eseholidini eBahamas. Kube Linda babehlele baphumule izingane ubone into ngaphandle edolobheni lakubo elincane. Lapho ekugcineni umndeni landizela ngoba ukufakelwa New York, bona ngengozi wahlangana Sarah Douglas - ibhizinisi nowesifazane umnikazi inethiwekhi enkulu ukumodeliswa ejensi.
Keyt Moss ebusheni bakhe kwaba kuhle, ngakho musa ukushiya nandaba Sarah, futhi wacela kuye ukusebenza ngesikhathi ejensi. Kungenxa yaleso senzakalo ithuba ngokushesha umfanekiso Kate yabonakala ikhava edumile magazini Face. Futhi ekuqaleni '90s, Kate wakwazi usayine inkontileka noCalvin Klein abase bekhulile, inani okwakukhona cishe ku- $ 4 million. Futhi inkontileka kwaba inhlekelele Kate - wayengeyena nje supermodel, futhi uyisibonelo esihle kakhulu ngaleso sikhathi evelele "-heroin Chic". Kuyaziwa ukuthi vogue mncane zesifazane, androgyny, nezinwele ezinde. Izingubo abesifazane isibe okuningi okufana emadodeni. Keyt Moss ebusheni bakhe hhayi kube nokuhambisana nalokho kulesi sithombe.
Abathwebuli ukukhangisa kanye Sokuzenzela ejensi ngokuzikhandla bexhashazwa amantombazane ukuba mncane, futhi ngo-2000, Kate isibe omunye onobuhle eliphakeme ikhokhwe emhlabeni. I cindezela ngokuvamile osolwa ntombazane ukusetshenziswa obungemthetho nezinto ezithinta ingqondo, futhi kufanele kuphawulwe ukuthi amacala akakwazi ngokuthi isisekelo.
Keyt Moss ebusheni bakhe akazange ihluke impumelelo akhethekile umsebenzi, kodwa supermodel esizayo weyengenandaba. Yena kwakufanele eziningi abangane abasha naye ukuthi anganelisa kwezokuzijabulisa. Cishe njalo ebusuku esekhokha imibuthano ezinomsindo, ngesikhathi okungadingi usuyabenyanya ukusebenzisa uphuzo oludakayo nokubhema. Lapho ngineminyaka engu-17, uMoss wayehlala intatheli owayebizwa ukuqopha yona ezihlukahlukene omagazini.
Izici isitayela Moss
Keyt Moss isitayela kakhulu efanelekayo ukuze zenze izikhangiso, futhi kusukela ngo-1990 imodeli asebenzayo ukuvela izikhangiso. Kusukela cishe ngo-1995, ngemuva kokuphothulwa inkontileka noCalvin Klein abase bekhulile, imali supermodel waba kungathi izinkulungwane 10. Dollars ngosuku. Moss ayikwazi enginakho kakhulu ngekusasa labo futhi ngokoqobo ngithuka imali nsuku zonke. izinkanyezi Abaningi akwazi ukuzikhokhela okunethezeka enjalo. Nokho, isibonelo ukuphila siqu kwaba okufanayo njengoba ukuthi kwabaningi.
Keyt Moss futhi Dzhonni Depp ahlangana naye ephathini, bese imodeli is ngokushesha ehlukanisiwe ohlala naye kwakhe. Ngesikhathi ebonana nge Keyt Depp wahlushwa ukuluthwa i-heroin. Ubuhlobo babo, eyayihunyushwe kahle benamandla izidakamizwa kwezidakamizwa notshwala, yaphela ngokushesha njengoba yaqala. Keyt Moss futhi Dzhonni Depp behlukana lapho umlingisi waya Vanessa Paradis. Kodwa ngisho nangemva kokushiya Moss futhi Depp besilokhu singabangane. Kwaphela iminyaka emine baba ibekezelelwe nomunye kuphela, ngoba naye azithandayo.
Kwakuphakathi kule nkathi yesikhathi, uMoss esesifundazweni esibhedlela sabagula ngengqondo. Ekuqaleni, umphakathi angazanga mayelana kweqiniso uphethwe Kate, kodwa kamuva kwaziwa ukuthi imodeli welashelwa etshwaleni. Ngemva nokuvuselelwa Moss wahlangana abadlali eziningana owaziwa iminyaka emithathu. Babehlanganisa Leonardo DiCaprio noMarku Wahlberg.
Kuyini isitayela Keyt Moss wazibonakalisa kukhanga eziningi ukukhangisa ejensi, okuyinto ukusebenza njengesibonelo? Ngemva ukubukeka kwakhe wabenza ukushintsha umbono wabo mayelana canons ubuhle. Eyokuqala umpetha onobuhle - sibukeke mncane androgynous. Futhi baletha udumo freckles imodeli futhi engavamile isakhiwo quin ebusweni. Ekuphileni kwansuku zonke, imodeli ngempumelelo ihlanganisa izitayela ezahlukene izingubo - lena zakudala, Retro kanye punk. Imodeli ngokuvamile babekhetha ompungana futhi omnyama, kulula zingqubuzana nemithetho imfashini, ngokuhlanganisa labo izinto ezihlobene ikhabethe ukuthi ekushalazela kwaba nesimiso sobuntu sokuhlalisana ngokuthula njalo. Moss kalula ukukhokhela ukuza umuntu ihembe lace kanye jeans bobusha.
Amapharamitha Keyt Moss
ubuhle Abaningi unesithakazelo kunoma yiliphi imodeli isisindo, ubude kanye nobudala. Kate lapho esekhulile 173 cm ukala kg 48 kuphela. nemingcele yayo bakha 86 - 58 - 89 cm Ubudala Keyt Moss -. engu-43. Nokho, izintatheli ukwazile ukwambula imfihlakalo mncane Moss ekuqaleni kwenkonzo yakhe. Kwavela ukuthi ngezabelo yayo imodeli iyadingeka ukusebenzisa izidakamizwa. Ngemva Moss obala, wathola amandla ukuqinisekisa esidlangalaleni ukuthi kuyiqiniso. Iphinde wakhipha axolise emphakathini ngenxa yokuthi imisebenzi zabo zikhuthaza nokuzincisha ukudla. Kodwa ngemva kwalokhu scandal imodeli imali liye landa kuphela. Ngo-2007, iphephandaba laseBrithani, i-Sunday Times eshicilelwe isamba esimweni saso - yingaleso ezingu-45 amakhilogremu. Moss elapha endaweni 99th phakathi kwabesifazane abacebe kakhulu e-UK. Ngawo lowo nyaka wayethola endaweni yesibili ohlwini amamodeli eqolo emhlabeni wonke.
Ngesikhathi sakhe sokuphumula Moss uthanda ukudweba. Nokho, imodeli bekulokhu wokuzilibazisa, kodwa ngokuba e ehlaselwe ukucindezeleka. Ngakho-ke, izithombe elikhuhluziwe wakhe ukuphila, avalele izinkanyezi. Ngokwesibonelo, omunye self-portraits imodeli wadayiswa endalini ngoba izinkulungwane 61. Dollars. imodeli yakhe ngesineke usebenzisa lipstick negazi ke-isoka lakhe - Pete Doherdi.
George Zhzhenov: Biography, empilweni yakho, umndeni, unkosikazi, izingane
Usosayensi wezombangazwe Mark Urnov: Biography, imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
Ruban-internet Alena - owawina show "supermodel ngesi-Ukraine"
Melange: ukuthi kuyini nokuthi lapho kudingeka khona
Indlela ayakhulelwa ku "Avatar" nezinye izimfihlo umdlalo
Article 212 Criminal Code: izimpawu, isijeziso
Siyaqonda ukuthi i lwaleli anjalo "DotA 2"